Iimpawu zokukhangela: Ishishini, iqonga ledatha eliqhutywa yidatha | Martech Zone
Kukho ezininzi Zixhobo ze SEO ifumaneka ngezandyondyo zemarike rhoqo ngenyanga. Ingxaki kwisininzi kwezi zixhobo kukuba zijolise kwiimetriki ekunokwenzeka ukuba zazibalulekile kwiminyaka eyadlulayo, kodwa azisekho. I-Searchmetrics lishishini, iqonga ledatha ye-SEO eqhutywa kukuvela kwaye ihambise iziphumo kubaxumi bayo-kwilizwe liphela.
Isalathiso seinjini yokukhangela zanamhlanje kunye nenqanaba leWebhu esoloko isanda ngokukhawuleza nangokuchanekileyo ngakumbi kunangaphambili. Baye bavela ukuze balwe nogaxekile kwiWebhu kunye nokufakwa kwegama elingundoqo. Baye bavela ukuze balungiselele iziphumo zeinjini yokukhangela esekwe kwisixhobo esisetyenzisiweyo kunye nendawo ekuyo umsebenzisi. Iinjini yokukhangela ngoku zibeka ipremiyamu kwizicwangciso ezifanelekileyo zomxholo eziqhuba ukubandakanyeka.
Ngenxa yoko, ukusebenza kokukhangela kunxibelelana ngokusondeleyo nokusebenza komxholo kuwo onke amajelo, ukusuka kwiiwebhusayithi ukuya kuthungelwano lwentlalo. Ngapha koko, olu tshintsho lwenzile iparadigm entsha yokukhangela-hayi ukukhangela kuphela kodwa ukukhangela kunye nokwenza umxholo. Kwaye ukusukela iinjini zokukhangela zibeke ucingo ngeenxa zonke kwidatha yazo, amaqonga e-SEO afuna ukuqikelela nokuvavanya ukusebenza komxholo kufuneka azise idatha yabo etyebileyo kwiqela. Kwaye izixhobo ezinamandla ngakumbi zokuyihlalutya.
Uphendlo lweeMetmetrics yakhe i-database yezembali ehlanganisa iminyaka esi-7 nangaphezulu kwama-250 eziqwenga zolwazi, kubandakanya amagama abalulekileyo, amagama okukhangela, amakhonkco ezentlalo kunye ne-backlinks Endaweni yokuxhomekeka kwidatha yomntu wesithathu, amandla abo edatha etyebileyo kukhangelo lwe- # 1 kunye neqonga lokusebenza komxholo. Ibandakanya idatha yehlabathi jikelele, iselfowuni kunye neyasekhaya egubungela i-organic kunye ne-pay search, kunye nemidiya yoluntu. I-Searchmetrics inokufikelela okuphezulu kwihlabathi kuyo nayiphi na iqonga le-SEO, ikhasa iWebhu rhoqo kumazwe angaphezu kwe-134.
Iimpawu eziphambili zeSuetmetrics Suite
UkuSebenza koMxholo -Izixhobo zokukhangela zivelisa umxholo okhuphisana nawo wokusebenzisa ukutsala abathengi ojolise kubo. Kwaye ikubonisa ukuba ungasakha njani isabelo sentengiso- kunye namaphepha afanelekileyo kunye nokuzibandakanya atsalela abo banokuthi bathenge.
Iselfowuni SEO -NgokuPhendla iimetrics, unokufikelela kubaphulaphuli abahambahambayo, kunye nezona ndawo zinamandla kunye nezichanekileyo ezichanekileyo zeshishini kunye nokuqonda kwezithuthi. Amanqaku okuKhangela okuBonakala kweSelfowuni sisalathiso sentengiso esikhokelayo sobukho be-Intanethi obuhanjiswayo.
Ulungelelwaniso lweSiza oluShukumayo -Ukuphuculwa kwesayithi yokuKhangela yenza ukukhasa okunzulu ukuze ichonge imiba yolwakhiwo kunye neempazamo, kwaye ikuncede ubeke phambili into oza kuyilungisa kuqala. Ungathelekisa ukusebenza kwidesktop kunye neselfowuni kunye nee-desktop zethu ezikhethekileyo kunye neearhente zokurhubuluza.
Ukunika ingxelo nge-ROI kunye neeDashbhodi-NgeSuitmetrics Suite, ungahlalutya, ulinganise, uqikelele kwaye unike ingxelo kuwo onke amaphulo akho okuthengisa ngokwedijithali, kubandakanya ukukhangela, umxholo, iPPC kunye noluntu.
Amanqaku okubonakala -Ukubhekisa kwiziko ledatha lolwazi olukhulu lokukhangela kwihlabathi, Amanqanaba okumgangatho wokuKhangela okuBonakalayo kwamanqaku kunye nokuBonakala kweMfono ngokuthembekileyo nangokuchanekileyo ukulinganisa ubungakanani bedesktop yakho kunye nobukho be-Intanethi obuhanjiswayo. La manqaku asebenzisa ivolumu yokukhangela, iimodeli zokunqakraza ezinamandla kunye neendlela zokufunda ngomatshini ukubala ukubakho konqakrazo ngaphakathi kweziphumo zophando.
Uphendlo lweeMetmetrics lukhangelo lweshishini oluphambili kunye neqonga lokwenziwa komxholo, ikhupha iminyaka eli-10 yokuyila imveliso, ikhokelwa yenye yee-SEOs ezili-10 eziphambili kwihlabathi, UMarcus Tober. Ngabasebenzisi abamalunga ne-100,000 kwihlabathi liphela, i-Searchmetrics Suite luphando lweshishini # 1 kunye neqonga lokwenza umxholo okhethiweyo kwi-eBay, Staples, Volvo, T-Mobile, Nokia, Tripadvisor nokunye.
Funda ngakumbi malunga neMetmetmetrics
I-Searchmetrics ihambisa i-SEO yeshishini kunye nohlalutyo lokuthengisa umxholo, iingcebiso, ukuqikelela kunye nokunika ingxelo kwiinkampani ezifuna abathengi abanokubafumana ngokukhawuleza. Kuthetha ukuba amathemba kunye nabathengi bachitha ixesha elincinci ukukhangela kunye nexesha elininzi lokuthenga. Bayibiza ngokuba ulungiselelo lwamava okukhangela.
Ukubhengezwa: Esi sithuba sixhaswe ngumxholo nge Fumana Impembelelo Yakho.
tags: ulungiselelo lomxholoidatha eqhutywa yidathaishishini seoishishini seo iqongaimarcus toberuhlalutyo seo mobileUkulungiswa kwesiza esothusayoIimpawu zokukhangelaIideshibhodiloo ngxeloukurhubuluza kwesizaamanqaku okubonakala